Teôlôjian'ny fanafahana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Teolojian'ny fanafahana)
Ny teolojian'ny fanafahana dia firehana teolojika kristiana izay nandray ampahany amin'ny fotokevitra marksista avy ao Alemaina izay naondrana mankany Amerika Latina, ary narahin'ny fihetsiketsehana ara-piarahamonina sy ara-politika, mikendry ny hamerina ny fahamendrehana sy ny fanantenan'ny mahantra sy ireo voailikilika ary hanafaka azy ireo amin'ny toe-javatra tsy azo leferina iainany. Io teolojia io dia miorim-paka amin'ny zavatra niainan'ny vahoaka hebreo notarihin' Andriamanitra hiampita ny Ranomasina Mena sy namakivaky tany efitra avy any amin'ny tany nahandevozana, i Egipta, ho any amin'ny "Tany nampanantenaina", dia ny tany Kanaana, araka ny Bokin'ny Eksodosy ao amin'ny Baiboly (Eks. 12 sy ny manaraka). Izany dia "hiakam-paminaniana" ho amin'ny fanjakan'ny fahamarinana bebe kokoa sy ho amin'ny firotsahana an-tsehatra amin'ny fampisiana ny "Fanjakan' Andriamanitra" izay tokony efa manomboka sahady ety an-tany. Ny fisaintsainana teolojika dia miainga amin'izao fototra izao: mamaky Baiboly ny vahoaka mivory dka mahita fankaherezana sy fanilovana handraisany an-tanana ny hoaviny.
Ny hoe "teolojian'ny fanafahana" dia nampiasain'ny pretra peroviana Gustavo Gutiérrez nandritra ny kongresy nataon'ny Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) tao Medellín, tanàna any Kolombia, tamin'ny taona 1968, izay nivorian'ireo evekan'ny Eglizy katolikan'i Amerika Latina sy Karaiba. Novelabelariny sady nakambany ao amin'ny boky Teología de la liberación nivoaka tamin'ny taona 1972 ny fandinihany, izay azo heverina fa teboka niaingan'io firehana teolojika io. Tamin'io taona io ihany dia nanohana ny tsanga-keviny ilay presbiteriana Rubem Alves any Brezila tao amin'ny bokiny Towards a theology of liberation.
Amin'ny lafiny fampiharana dia hita fa nindramina tamin'ny marksisma ny fitaovam-pitsikerana sy fandinihana nampiasaina, na dia saiky mihataka tanteraka amin'ny fotokevitra marksista aza ireo teolojianan'ny fanafahana. Asandrany avo ny fanafahana ny vahoaka ka fiverenana indray amin'ny lovam-pampianarana kristiana momba ny firaisan-kina izany. Isan'ireo malaza amin'ny teolojianan'ny fanafahana ny arseveka katolika breziliana Hélder Câmara sy ny arseveka katolika Oscar Romero tany Salvadoro na koa ilay teolojiana breziliana Leonardo Boff.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Teôlôjian%27ny_fanafahana&oldid=1000041"
Voaova farany tamin'ny 7 Janoary 2021 amin'ny 13:34 ity pejy ity.